Telefoonka bidaarta ii soo qor! | Somaliska
Asc jimcale waan ku salamay waxan kaa rabaa ciwaanka ama telkii kan barniga bidaarta habeya ama timaha bera!
Telefoonka bidaarta ii soo qor!
Anigu maba fahmine haley fasiro barnaamajkaan macnihiisa mahadasanidiin mudanayaasha
Waa e-mail uu ii soo qoray mid ka mid ah akhristayaasha. Ma haysaa telefoonka dhaqtarka bidaarta?
jimcale Qarxisbaad bilowday’ wiilka emailka kuusoo diray Suaashiisa uga jawaab ama Iska daa maxaad Banaanka u keenaysaa’ because Personal Message ayuu kuusoo diray adna Mawduuc ayaadba ka dhigtay’ wax fiican maad samayn.
Waxa kuracsanahay sida ay walalahayga kadhawajiyeen Mr jimcaale waxa kudhahi lahaa raali galin baxiso wayo Mase waydisay inaa su ashisa ad mowduuc kadhigayso asc
Ustaad iyo Liban. 1 miyaan soo qoray magaca ama emailka qofka soo diray fariinta? waa maya, 2 sidee ku keenay in aan anigu hayo telka dhaqtarka bidaarta? 3 haddii qof kale uu hayo telkaas halkaan haku soo qoro si qofka fariinta soo diray uu uga faa’idayso.
Jimcaale dadkii Dublin ahaa xaalkoda war hadaa ka hayso wax iiga sheeg
horta waa mawduuc qiimo badan lkm waxay ahayd in doodisa looga fasax qaato
dadka bidaarta leh waayo hanti ay gaar u leeyihiin oo aanay cidi la wadaagin.
ta laba ninka maanta bidaar haystaa timo uma baahan ,iibisana maayo
dawo bidaareed !!!
bidaarta dhakhtarkeeda nairobi baan ku arkay lkn wuxuu ku dhahaa daawadeeda anaa isticmaali lahaa haddaan dhab uhaayo lkn talo ayan hayaa waa wax yaab leh moohoo haddaa kaa telkiisa rabtaan waan idiin helaa
Jimaale qalad ma uusan sameen.Qofka magaciisa masheegin fikradeeyda ufaa ideeya hada haysaan dhaqtarka bidaarta numberkiisa looool.